Edemede Savannah Marie na Martech Zone |
Edemede site na Savannah Marie
Ọ bụ ebe mara ezigbo mma ịnọdụ ruo mgbe mmadụ niile malitere ịga ebe ahụ. ” Nke a bụ mkpesa nkịtị n'etiti hipsters. Ndị ahịa na-ekerịta nkụda mmụọ ha; ya bụ, ọ bụrụ na i jiri okwu ahụ “dị mma” dochie okwu ahụ “dị mma”. Otu nnukwu ọwa ahịa nwere ike tufue ọfụma ya na oge. Ndị mgbasa ozi ọhụụ na-ewepụ anya na ozi gị. Ọnụ na-arịwanye elu na-eme ka itinye ego ghara ịba uru. Mgbe ọrụ na-bnọ nkịtị gwụrụ na-aga ka greener ịta nri. Idebe
Oha na ndu n’ozuzu ha yiri ka ha n’agha-oso; ijide ma ọ bụ tufuo bụ ụkpụrụ maka ọtụtụ azụmaahịa. N'ezie, ndụ dị n'okporo ụzọ ngwa ngwa ewerela ọhụụ ọhụrụ na iwebata weebụsaịtị ndị dị adị iji kesaa ọdịnaya dị mkpụmkpụ - Vine, Twitter na BuzzFeed bụ naanị di na nwunye, ihe atụ ama ama. N'ihi nke a, ọtụtụ ụdị agbanweela uche ha iji nye ozi ndị ahịa ha chọrọ na obere snippets
N'ime afọ ole na ole gara aga, infographics adịla ebe niile ma nwee ezi ihe kpatara ya. Ndekọ ọnụ ọgụgụ na-adịkarị mkpa iji tinye ntụkwasị obi, na infographics na-eme ka ọ dị mfe ịkwatu data nke nwere ike ịbụ na ọ ga-abụrịrị ihe na-agwụ ike maka onye na-agụ ya. Site na iji infographics, data na-aghọ ihe mmụta na ọbụlagodi ihe na-atọ ụtọ ịgụ. Infographic Evolution Ka 2013 na-achọ ịbịa na njedebe, infographics na-agbanwe ọzọ etu ndị mmadụ si egwu ihe ọmụma. Ugbu a, infographics abụghị